Mialà amin'ny mason-jaza vaovao: rehefa mila mitsoka ny fanairana ianao?
reny / From Poster
Ahoana ny "famohana" ny ranomasony? Rahoviana no takiana ny fitsaboana? Rehefa mifampiresaka amin'ny dokotera Discharge amin'ny maso dia aretina mahazatra amin'ny zaza vao teraka, izay matetika mifandraika amin'ny alàlan'ny fantson'ny lacrimal. Allocations nipoitra miaraka
Hetsika fanatanjahantena isan'andro ho an'ny ankizy mpianatra: tsara na ratsy
Momba ny tombotsoan'ny enta-panatanjahantena ho an'ny ankizy any an-tsekoly Ny fanao mavesatra ara-panatanjahantena Inona avy ireo fanatanjahantena azo ampiharina ary izay tsy mendrika amin'izany dia kilalao ivelany, ny asa ara-batana dia ampahany tsy azo ihodivirana amin'ny fiainan'ny ankizy praseker. Raha izany no izy
Loza mihoa-pampana: mbola marefo noho ny diabeta gestational
Ny vehivavy dia tsy manana fitsapana ilaina foana.Inona ny loza ateraky ny diabeta amin'ny gestational? Ny vehivavy 74% irery ihany no nifikitra tamin'ny soso-kevitra manan-danja.Iza ny vehivavy manao diabeta gestational? Ny fitsapana amin'ny fandefasana glukosa dia atolotra any Rosia maimaim-poana
Impiry matetika no manao fanatanjahan-tena ny tanora? Momba ny tombontsoa sy ny loza ateraky ny hetsika ara-batana
Mampiavaka ny vatan'ny zatovo iray: Impiry ary mandritra ny hafiriana no manao fanatanjahan-tena: hoy ny fanafody hoe inona no karazana fanatanjahantena tsara indrindra ho an'ny zatovo. Amin'ny ankapobeny, ny fotoan-tsarotra toy izany dia maharitra hatramin'ny 11-12 ka 17-19
Manafoana ny zaza: maninona no miandry ela?
Fahita ny mahazatra eo amin'ny ankizy? Inona no soritr'aretina mampiseho ny fahatsentsenan'ny aretin-tsaina? Mety hisy aretina mampidi-doza ve? Ahoana ny fomba fitsaboana ny constipation? Mahasoa ve ny mamboly ankizy ao anaty vilany iray rehefa mihinana? Inona no anjara asan'ny sakafo? Sembana -
7 Nightmare Facts About Antiquity
Toerana ho an'ny fiterahana Ahoana ny fomba nahaterahany? Mikarakara valan-jaza vao mandro tsy mandro ilay zaza mandra-pahatongan'ny herinandro 6 Fandidiana ny kibo ho an'ny zaza Midwife nametraka ny taolam-paty ho an'ny Colostrum vao teraka taorian'ny niterahany, ny vehivavy tantsaha dia nomena vodka, ary nomen'ny kafe ny vehivavy mendri-kaja
Fa maninona no tsy tokony avelan'ny ray aman-dreny hitomany mandritra ny fotoana maharitra ny zanany?
Fa maninona no mitomany ny ankizy? Betsaka ny "torohevitra tsara" amin'ny fiatrehana ankizy mitomany dia mety manome toky ny ankizy ny fihirana. Nandritra ny 70 taona maro, ny dokotera dia nanoro ny ray aman-dreny hamela ny zanany hitomany irery. Ny fandalinana vaovao dia nampiseho ny mifanohitra amin'izany
1 2 ... 11 manaraka →